China LABER® U Profile Girazi fekitori nevagadziri | Yongyu
U mbiri girazi U chiteshi girazi- Iko kusanganisa kweanesthetics uye zvinoshandiswa
Kusarudzwa kwegirazi reimba yekuvaka kana hofisi yekumisikidza hakufanirwe kutorwa. Iwe unofanirwa kugara uchiongorora zvaunosarudza kuti upedze nemufananidzo-wakakwana. Kana izvi ndizvo zvauri kuita izvozvi, yedu U mbiri girazi yakakodzera kutarisisa pairi.
Haisi kungoita seinotaridzika, asi iyi mhando yeU profile girazi / U chiteshi girazi zvakare inokwereta zvinhu zvakawanda zvinoita kuti ive yakakodzera ekunze nekudyidzana mukati.
• kuwedzera simba sekuenzaniswa negirazi rakajairwa
• yakakura mwenje kusanganisa
• yakanakisa acoustic insulation
• kuchengetedza kupisa
• kuchengetedza ruzha
Kana zvasvika kune aesthetics, U mbiri girazi / U chiteshi girazi rinogona kuwedzera chinoshamisa chando chisimba maitiro ako emukati dhizaini. Zvinogona kuiswa kana kusungirirwa sandwich kuti iwane anodiwa opaqueness level uye luxe chitarisiko.
Sarudza forodha yekugadzira yeU profile girazi / U chiteshi girazi yegirazi facades / chidzitiro rusvingo, zvemukati zvikamu, kana chero chinhu chipi zvacho
Kana iwe uchida mamwe maratidziro kana frosted athari, Yongyu Girazi rinogona kubatsira. Isu takagadzirira kuzadzisa tsika yekuraira kuti zvigadzirwa zvedu kupedzisa kamuri yako yekugaja kana girazi madziro ane U mbiri girazi / U chiteshi girazi. Pamusoro pekuve eco-ane hushamwari, iwo sarudzo yako inonyanya kushanda (kunyangwe iwe uchitsvaga dhizaina dzakagadzirwa).
Sarudza pane girazi yakamira kunze kwako uye rega Yongyu Glass ikupe iwe nayo!
Yepfuura: Kuchengetedza Girazi Njanji & Fenzi
Inotevera: Smart girazi (Chiedza chinodzora girazi)
Yakadzika Iron U Mbiri Girazi
U Mbiri Yegirazi Art
U Profile Girazi Dimensions